Shina Vehivavy fiara tsindry rano diso fanodinana famonoana fitaovana / paompy Fitaovana sy trano | FeiFanWei
Avereno eto an-tany ny maitso!
Paompy afo fanodinana rano finday
Paompy-fiompiana avoakan'ny fiara
Paompy Mini Portable
Paompy afo maloto Knapsack
Fitaovana tànana momba ny ala
Famonoana afo / afovoan-afo
Fitaovana fitaovam-piadiana afo
Famonoana kitapo ny kitapo ala
Fitaovana famoahana afo
Fiara avo tsindry mavesatra famonoana fitaovana / paompy
1. Ny tetika fanamafisana dia azo atao ary afaka mifanentana amin'ny fiara samihafa mba hahatsapa ny fomba fiasa sy ny vokatry ny fiadiana amin'ny afo. Azo alamina ao anaty kamiao mpamono ala, zotra, mpitatitra olona ary fiara fitaterana rano, koa izy io dia azo ampiasaina irery, ary omena vatan-drano fiomanana arakaraka ny karazany amin'ny fiara.
2. Ny fitaovana dia manana toetra mampiavaka ny fomban-tsary sy ny tsy manam-paharoa, ny halaviran-drivotra lavitra, ny fotoana maharitra famonoana afo, ny fanodinana rano ary ny fiarovana ny tontolo iainana, sns. Izay mety hahomby amin'ny famonoana afo mavesatra lavitra sy fanaraha-maso amin'ny fomba mahomby mandritra ny dingana famonoana afo.
3. Ny seho manontolo dia ahitana motera misy motera Honda, lakandranon-tsolika avo lenta, tsindry iray mandrindra ny valiny, fametahana haingam-pandeha, basy vita amin'ny tsindry avo be, hodi-posy vita amin'ny vy vita amin'ny vy, milina fitaterana, rano avo -mehy ny felam-bolo vita amin'ny vy, ny bika, sns.
Herin'ny motera petrol ≥24HP
Miatrika fanerena ≥22MPa
Ny tsindry fiasana ≥18MPa
Arakaraka ≥40L / min
Mean Range ≥35m
Ny halaviran'ny fitaterana ambony indrindra ≥5000m
Max. Lift ≥1000m
Lanjan'ny milina feno ≤106kg
Previous: Paompy afo madinidinika Mini
Manaraka: Paompy fanodinana rano rano finday
paompy famonoana afo
Afon-kitapo azo entina miady amin'ny paompy
No.118 Youyi Street, Xinhua Dist., Tanànan'i Shijiazhuang, Faritanin'i Hebei, Sina